ဘဝမှတ်တိုင်: KitKat 4.4 Launcher Theme v3.02 APK (Update March-25)
KitKat 4.4 Launcher Theme v3.02 APK (Update March-25)
စက်ရုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Android 4.4 Kitkat ပုံစံနဲ့ Theme လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.4 စတိုင်လေးဆိုတော့ တမျိုးတော့ ဆန်းနေပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ Screen Shoot လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Theme လေးကို Nova Launcher. , Apex Launcher. , Go Launcher. , Holo Launcher. , ADW Launcher. , Action Launcher Pro. , Solo Launcher. , စတဲ့ Launcher တွေနဲ့ အခြားသော Launcher များမှာ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android 4.4 Kitkat Theme ကို သုံး မယ်ဆိုရင်တော့ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/26/2014 12:02:00 am